hein – Myan Ball
hein | September 16, 2019
၁။ တီမိုဝါနာကို ဘိုင်ယန်တို့ ပြန်ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဘောလက် ဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းကြီး မိုက်ကယ်ဘောလက်က သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ လိုက်ဇစ်ပ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး တီမိုဝါနာကို ခေါ်ယူဖို့ ပြန်လည် ကြိုးစားလာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် ဂျာမန်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးဟာ အသင်းနဲ့ (၂၀၂၃) ခုနှစ် အထိ စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်ရှိနေသေးပေမယ့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့
“ကျွန်တော့်အပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားထားကြတာတွေကို တွေ့တော့ ကျွန်တော့်အမေက ငိုတယ်ဗျ။” လို့ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး အေဘရာဟမ်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ ဆိုလာပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ဥရောပစူပါဖလားပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံလီဗာပူးနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီးတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲက အကြိတ်အနယ်ရှိခဲ့ပြီး ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်အထိ ခံယူခဲ့ရတာပါ။ လေးလုံးမြောက်အထိကို နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအကုန် ပင်နယ်တီဝင်အောင် ကန်သွင်းခဲ့ကြပေမယ့် ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် အေဘရာဟမ်ရဲ့ နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီက
သူရှိနေတဲ့ အသင်းက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၉၇) မှတ်အထိ ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် …….. ပရီးမီးယားလိဂ်အတွေ့အကြုံရင့်နည်းပြဟောင်းကြီး ဟယ်ရီရက်နက်ပ်ရဲ့ သားဖြစ်သူ ဂျေမီရက်နက်ပ်က ဗန်ဒိုက်ချ်သာ မရှိရင် သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း လီဗာပူးအသင်းက ထိပ်သီး (၄) သင်းစာရင်းဝင်ဖို့အတွက်တောင် ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ နော့ဝစ်ချ်အသင်းနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲမှာ ဒီရာသီမှ
၁။ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ မဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ မက်ဆီ ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီဟာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးလို့ သတင်းတွေက ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဒီအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက မေဂျာလိဂ်ကလပ်အသင်းသစ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်များရဲ့ အဆိုအရ မိုင်ယာမီအသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ မက်ဒေါ်နက်နဲ့ မက်ဆီရဲ့ဖခင်
“ကျွန်တော် ဒီဗီဒီယိုကို တစ်ခါမှမကြည့်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ တစ်ခါမှကို မမြင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ တကယ်ကို မယုံနိုင်စရာပါပဲ။” လို့မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောကြားခဲ့တာပါ …… ဘယ်လောက်ပဲဆိုးသွမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ၊ အဖေကတော့ အဖေပါပဲ။ ရော်နယ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ အဓိကရုန်းကန်ရင်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ စင်မြင့်ထက်မှာ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အဖေကတော့ အရက်ရဲ့ ကျေးကျွန်အဖြစ် ဘဝကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါ။ ဆင်းရဲတဲ့နွမ်းပါးတဲ့
“ယူနိုက်တက်နည်းပြရာထူးအတွက် ကမ်းလှမ်းခံရရင် ထွက်ပြေးမှာ။” #ဂယ်ရီနဗီးလ်
ယူနိုက်တက်အသင်းက ကျွန်တော့်ကို ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်က တစ်မိုင်လောက်ထွက်ပြေးသွားမှာပါ …… ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ်က သူ့ကိုသာ အသင်းဟောင်းရဲ့ နည်းပြရာထူးအတွက် ကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုရင် ထွက်ပြေးသွားမယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ (၂၀၁၃) ခုနှစ်မှာ ဖာဂူဆန် ဘောလုံးလောကကို စွန့်ခွာသွားပြီးနောက် ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြရာထူးက တည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘဲ အမြဲတမ်းနည်းပြ (၃) ယောက်အထိ အပြောင်းအလဲ
ဗန်ဒိုက်ချ်နဲ့ ကလော့ပ်ကို မျက်စိကျနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘာကာ၊ ရီးရဲယ်တို့နဲ့အတူ အခြားသောမနက်ခင်းသတင်းတိုများ ……
hein | September 15, 2019
၁။ ဗန်ဒိုက်ချ်နဲ့ ကလော့ပ်ကို မျက်စိကျနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘာကာနဲ့ ရီးရဲယ် စပိန်ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်တို့ဟာ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ အဓိက ပုဂ္ဂိိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ နည်းပြ ကလော့ပ်နဲ့ နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်ချ်တို့ကို မျက်စိကျနေပြီလို့ စပိန်နာမည်ကြီး AS သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းလုံးဟာ သူတို့ရဲ့လက်ရှိနည်းပြနဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအပေါ် အားမလိုအားမရဖြစ်နေပြီး လီဗာပူးအသင်းကတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ
Super Sunday ရဲ့ နောက်ဆုံးရ နေ့လယ်ခင်းသတင်းတိုများ …….
၁။ ဒရိုင်းမာတင်စ်ကို သေချာပေါက် စာချုပ်သစ်သစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အန်ဆယ်လော့တီ နာပိုလီနည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီက အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဒရိုင်း မာတင်စ်ကို အသင်းမှာ သေချာပေါက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားဟာ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဆမ်ဒိုးရီးယားအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လာမယ့်နှစ်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် မာတင်စ်ကို အသင်းမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အန်ဆယ်လော့တီက ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ ၂။ အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့
ပေါ့ဘာကိုမရရင် ကန်တီကိုဆွဲစိမယ့် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူ အခြားသောမနက်ခင်းသတင်းတိုများ ….
hein | September 14, 2019
၁။ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်ရဲ့ အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ် လူငယ်ကို အပြိုင်လိုက်နေတဲ့ ဘင်ဖီကာနဲ့ဗလင်စီယာ ဘင်ဖီကာအသင်းနဲ့ ဗလင်စီယာအသင်းတို့ဟာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းရဲ့ အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ် ကစားသမားလေး ဂျာဒင်ရေမွန်ကို အပြိုင်အဆိုင် စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ အင်္ဂလန်ယူ- ၁၇ အသင်းအတွက် ပါဝင် ကစားနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီကစားသမားလေးဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ ကလပ်အသင်းနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ်
အီဒင် (ဟာဇက်) က ကျွန်တော်တို့ ဂိုးရခါနီးမှာ သူလုပ်ပြနိုင်တာသမျှ အားလုံးကို လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် …. ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား ကော်တိုအာဟာ လီဗန်တေးအသင်းကို ၃-၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ အသင်းဖော် ဟာဇက်ကို ဒေါသထွက်မိတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းကနေ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဒီဘယ်လ်ဂျီယံ ကစားသမားဟာ မနေ့ညကမှ အသင်းသစ်အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်